Tareenka dhulka hoostiisa ee Paris ayaa naaqusaya isticmaalka tamarta qeyb ahaan iyadoo la adeegsanayo xalalka iftiinka nalalka ee loo yaqaan 'Philips LED'. | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYURUB33 FaransiiskaTareenka Paris ayaa yaraynaya isticmaalka tamarta qeybta yar ee Philips LED nalalka fudud.
Tareenka Paris ayaa yaraynaya isticmaalka tamarta qeybta yar ee Philips LED nalalka fudud.
25 / 03 / 2013 33 Faransiiska, YURUB, DUNIDA, tareenka, GUUD, Metro
Philips iyo shirkadda korantada ee Faransiis ee talaabada talaabada leh waxay iftiimin doonaan nidaamka metroga ee Paris tamarta korantada ku shaqeysa. Shirkadda ugu weyn adduunka ee 5 ee ka hoosaysa hindisada. Xerada xNUMX kun ee laydhka iftiinka ee ganacsiga gaadiidka RATP's 302 boosteejada tareenka iyo xarunta 66 RER waxaa lagu beddeli doonaa laydhka LED-ka, isticmaalka tamarta ayaa laga yareyn doonaa in ka badan boqolkiiba 250.
Paris, France - Royal Philips Elektarooniga (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ayaa ku dhawaaqday inay heshiis sanado badan la saxiixatay shirkada laydhka faransiiska ah ee tillaabada ah si ay u iftiimiso nidaamka metrooska ee loo isticmaalo tamar iftiinka ifka LED-ga. U wareegista loo yaqaan 'LED' waxay yareyn doontaa tamarta loo baahan yahay si ay u iftiimiso tareenka dhulka hoostiisa mara ee Paris iyo RER boosteejooyinka in kabadan 50% oo kor loogu qaado tayada iftiinka. Qandaraaska waxaa lagu abaalmariyay Groupe RATP, shirkadda gaadiidka ee Paris, si ay u daboosho in kabadan 85% metro iyo RER saldhigyada Faransiiska.
Mashruucan, Philips wuxuu la shaqeyn doonaa RATP si loo gaaro yoolka ah in la noqdo isku-xirkii ugu horreeyay ee gaadiidka adduunka, oo leh saldhigyo si buuxda u qalabaysan laydhka LED-ka. Iyada oo qayb ka ah hindisada, barta iftiinka ee 302 ee RATP's 66 Station subway iyo xarunta 250.000 RER waxaa lagu beddeli doonaa nalalka tamarta ku shaqeeya ee LED-ka.
Laga bilaabo 2004 illaa 2020, RATP waxay ujeeddadeedu tahay in la yareeyo isticmaalka tamarta iyo qiiqa gaaska ka baxa 15%. Nidaamyada tamarta ku shaqeeya tamarta iftiinka leh ee loo yaqaan 'LEDps' iyo kuwa tillaabada ah ee iftiinka leh waxay ka caawinayaan gaaritaanka hadafka. Qaddarka korantada ee hadda ay isticmaalaan xarumaha RATP ayaa qiyaastii ah 12% wadarta isticmaalka tamarta.
RATP waa midka adduunka ee '12' oo ay la socdaan 5 milyan oo safar ah oo maalin walba ku safra gudaha iyo hareeraha Paris. ganacsiga ugu weyn ee gaadiidka magaalada. Waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn adduunka oo leh shabakaddeeda isku-duwanaan badan oo ka kooban xariiqyo metroor ah oo loo yaqaan '14 metro', laba xarriiq RER (A iyo B), saddex xarumood oo taraam ah, jidadka basaska 350 iyo jidadka tooska ah ee taga labada garoon ee magaalada ee ku yaal bartamaha magaalada iyo nawaaxigeeda.
Alsancak-Bandirma Wax-qabadka Wax-soo-saarka Tamarta Tareenka Tareenka
Tartanka Teknooloojiyada ee Berito 11. IstanbulLight Fair
Waxqabadka Nidaamka Tareenka: Xakamaynta Wadada Wadooyinka iyo Maareynta Saxiixa 2013 - Mozambique
Ogeysiis Qandaraasle ah: Bixinta dhagxaanta ballastada